Ọrịa na-egbochi onwe ya
Ihe omuma banyere oria puru iche ndi mmadu enweela ma obu gabia oru, na ntiwapu nke ugbua kwesiri ime? 1. Etu ị ga - esi jiri akwa ịsa ahụ nke nwere ike wepụ nke ọma n'ụzọ ị ga - arụ ọrụ. Gbalịa ịhapụ ụgbọ njem ọha, a na - atụ aro ka ị jee ije, igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ buru ụgbọ ala nke onwe, bọs na - arụ ọrụ. Gbalịa ka ị ghara imetụ ihe na bọs aka.
2, otu esi abanye ulo ahu tupu ibanye n’ime ulo a ma jiri nlezianya nabata ule okpomoku, okpomoku di nkpa nwere ike banye ulo a, ma sachaa aka na ulo mposi.Iburu na aru ahu di elu karia 37.2 ℃, biko abanyela ulo a maka oru , ma laa n’ụlọ maka nlere anya na izu ike. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gaa ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ.
3. Debe mpaghara ọfịs ahụ ọcha yana ikuku 20-30 ruo ugboro atọ n'ụbọchị. Biko mee ka ahụ kpoo ọkụ mgbe ị na-eku ume gị. Mejuo ihe karịrị 1 mita n'etiti ndị mmadụ, ma kpuchie masks mgbe ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ. Buru aka mgbe ị na-asa ma na-a waterụ mmiri mgbe ọ bụla.
4. A na-atụ aro iyi nkpuchi ma saa aka tupu ịbanye n'ime ụlọ nzukọ. Oge ndị ọrụ na-ezute ihe karịrị 1 mita.Gụpụta oge ọmụmụ ihe, na-achịkwa oge nzukọ, oge nzukọ dị ogologo, mepee ikuku windo 1 .Ma aghaghi imebi ebe a na ezinari ya na ulo a. Mgbe enyere nzukọ aka, achoro ka edochasịa site n’itinye na mmiri esi.
5. Ebe a na-eri nri na-edobe nri iche iche iji zere ndị na-arụ ọrụ okirikiri. A na-ekpochapụ ụlọ oriri na ọ onceụ onceụ otu ugboro n'ụbọchị, a na-ehichapụ tebụl iri nri na oche mgbe ejiri ya. Ejikwala nri esiri esi nri. Zere anụ ezi anụ ezi. Yiri ihe mkpuchi ịwa ahụ nke nwere ike ịhapụ ya mgbe ị na-arụ ọrụ. Jiri aka gị sachaa aka gị ma hichaa ya na mbụ. Jiri mmiri ma ọ bụ mmanya na-egbu batrị ekwentị ma ọ bụ 75%. Jiri aka gị sachaa ime ụlọ ahụ ma hichaa ya, zere ọtụtụ mmadụ ịbịakọta ọnụ.
7. Pụọnụ ma yiri masks iji zere nnukwu igwe mmadụ.Họpụtanụ ebe dị anya karịa ihe karịrị mita 1 na ndị mmadụ ma zere ịnọ na ebe ọha ịnọ ogologo oge.
8. Kwuo ọrụ kwesịrị ekwesị na oge agafe n’oge ọrụ na izu ike iji hụ na ahụike dị mma.
9. A ga-ekpochasị mpaghara ọhaneze na foyer, corridor, ụlọ nzukọ, elu, steepụ, ụlọ mposi na akụkụ ọhaneze ndị ọzọ, na-agbasa ebe na-agbasa ebe enwere ike. agwakọta.
10. A na-atụ aro ka ihichaa ime na ụzọ nke ụgbọ ala pụrụ iche na njem gọọmentị na-a withụ ihe ọ alcoholụ alcoholụ na-aba 75% otu ugboro n’ụbọchị. Were bọmbụ na-eme ihe nkpuchi, ọ na-atụ aro ka bọs ahụ na-eji 75% mmanya n'ime ụgbọ ala yana ọnụ ụzọ na-ehichapụ disinfection.
Ndi oru ichu nta ma obu ndi n’enwe ahia ga enwu mkpuchi ma obu kpofuru ahihia, zere ibanye ha na aru na ngwa ulo, kpochapu aka na aka mgbe ogba aka. ndị ọrụ agha ga-eyi ihe mkpuchi iji rụọ ọrụ, ma jụọ ajụjụ ma debanye aha ọnọdụ nke ndị ọrụ ala ọzọ, ịchọta ọnọdụ na-ezighi ezi n'oge.
12, nleta gọọmentị otu esi eme ga-eyiri ihe nkpuchi. Tupu ị banye n'ụlọ ọrụ, lee ahụ ọkụ ma webata akụkọ banyere ngosipụta nke hubei na ọnya dị ka ahụ ọkụ, ụkwara na ọnyụnyụ na-anọghị n'ọnọdụ ndị a dị n'elu, na ahụ. ọnọdụ okpomọkụ dị na ọnọdụ 37,2 Celsius, nwere ike ịbanye na ụlọ ụlọ.
Sachaa aka tupu ị nafefe akwụkwọ akwụkwọ, ma jiri ihe mkpuchi kpuchie ya mgbe ị na-agafe akwụkwọ.14, na -eme telifon etu esi eme ekwentị agbakwunyere 75% mmanya na-ehichapụ ugboro abụọ n’ụbọchị, ma ọ bụrụ na ejiri ya ugboro ugboro nwere ike ịba ụba n’ụzọ kwesịrị ekwesị.